Sina Kit kitila tombokavatsa tsara kalitao Tsy misy tranga aluminium TZ-008 Famokarana sy ozinina | MOLONG
1) Masinina Penina Tattoo 1 pcs
3) Tongotra tongotra 1pcs
4) LBB Cartridges Needles 40pcs (10pcs isaky ny) 3rl, 5rl, 5m1,7m1
Manangona ny basy
1. Sasao madio ny tananao. Ny basy tatoazy dia mila tsaboina tsara. Mitandrema alohan'ny hikarakarana ireo masinina ireo. Sasao amin'ny savony misy bakteria ny tananao na manaova fonon-tànana vita amin'ny latex.
2. Mahalalà amin'ny basy. Ny frame dia mitazona ny sanganasa rehetra. Avy eo manana coil elektromagnetika roa ianao izay manome ny herin'ny masinina. Ny coil dia mamindra haingana ny bara famaohana, izay mifamatotra amin'ny fanjaitra voarara. Ny herinaratra dia mifamatotra amin'ny coil electromagnetic. Ireo singa rehetra ireo dia azo esorina na soloina raha ilaina.
3. Angony ny barika. Diniho ny fihazonan'ny basy. Misy lafiny roa amin'ny fihazonana ny fantsona sy ny tendron'ny basy. Apetaho amin'ny halavany mety kokoa, ary hamafiso ny visy roa amin'ny fangejana. Amin'ny salan'isa, ny fanjaitra dia tsy tokony hihoatra ny tendrony mihoatra ny 2 mm ary tsy latsaky ny 1 mm. Raha misy ra be loatra, dia lava loatra ny fanjaitra anao.
4. Atsangano ny fanjaitra. Topazo maso ireo fanjaitra azonao tamina kit. Tokony hanana haben'ny fanjaitra vitsivitsy ianao. Ampidiro ny iray amin'ny fanjaitra amin'ny alàlan'ny fantsona mankany amin'ny tendrony. Tandremo sao manadino fanjaitra rehefa mivory.
5. Ataovy azo antoka ny nipple. Ny nipple, fantatra ihany koa amin'ny hoe grommet, dia mitazona ny fanjaitra sy mihazona ny fototr'ilay basy. Apetaho eo amin'ny paingotra bara ny tsilo. Afatory amin'ny tampon'ilay fanjaitra ny tendrony fanjaitra.
6. Amboary ny fanjaitra. Raha vantany vao nangoninao ny fihazonana dia mila manamboatra ny halavan'ny fanjaitra ianao. Azonao atao ny manitsy ny fipoahan'ny fanjaitra amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny vise tube. Ny vise tube dia ny visy azo ovaina eo anelanelan'ny vatan-tongotra sy ny fanjaitra.
Previous: Silipo mainty manify kofehy azo ampiasaina amin'ny tendrony mangarahara
Manaraka: Hamafa toro-hevitra sterilized 108mm Miaraka amin'ny Grip Atsaharo ny toro-hevitra momba ny tatoazy maharitra ela azo ampiasaina amin'ny fanjaitra tatoazy
Kitapo ho an'ny vao manomboka
Kitapo Machine Tattoo Coil
Kitapo fanentsenan-tsofina azo alefa
Kitapo Fitaovana manindrona
Kit ny basy vita pirinty matihanina
Fitaovana tatoazy matihanina
Kitapo milina tatoazy matihanina
Kitapo fampitaovana tatoazy
Kitapo basy tatoazy
Kitapo Professional Machine an'ny tatoazy
Kitapo Masinina Tattoo
Kitapo milina tatoazy tsy misy tariby